SAWIRRO: Taageerayaasha Milan oo foori & aflagaaddo iskugu daray Donnarumma!! – Gool FM
Raage December 13, 2017
(Milano) 13 Dis 2017 – Foori iyo aflagaaddooyin duulaya oo ka imanayay taageerayaasha AC Milan ee San Siro ayaa kusoo dhacayay dhegaha Gianluigi Donnarumma kulankii ay 3-0 caawa ku garaaceen kooxda Hellas Verona ee Coppa Italia, taasoo ay ugu soo bexeen wareegga 8-da.
“Waa anshax xumo in 6 milyan sanadkii lagu siiyo lana soo iibiyo walaal dulin ama danayste ah. Haatan iska bax sabarkii wuu dhamaadaye!”, ayuu u akhrismayay baannar wayn oo ay wateen taageerayaasha Rossoneri ee Curva Sud.
Walaalka ay ula jeedaan waa Antonio – oo la dhashay Donnarumma caawana kaydka fadhiyay – kaasoo Giriigga looga keenay si uu u wehliyo walaalkii.
Waxay sidoo kale isku darayeen foori iyo caay iyagoo (“Donnarumma waa wasakh…”) markii ay is kululaynayeen laacibiinta Milan, waxaana qolka lebiska lagu arkayay Leonardo Bonucci oo niyadda u dejinaya Donnarumma.
Arrinta Donnarumma ayaa dib usoo cusboonaatey maalmihii yaraa ee tegey, iyadoo ay dad badani aaminsan yihiin inuu wiilkan fuullimaad daneed ka dhiganayo wakiilkiisa Mino Raiola oo raadinaya koox uu khidmad sare uga qaato iibkiisa.
EEG: Ronaldo oo isku dayey in uu Bale ka boobo gool!